Igama lam Ngu Lovedalius (ophinde aziwe ngo CryptoPharaoh). | PIVX
Igama lam Ngu Lovedalius (ophinde aziwe ngo CryptoPharaoh).
Sixelele ukuba ungubani?
Igama lam ngu Lovedalius (ophinde aziwe ngo CryptoPharaoh). Ndine minyaka ali 23. Ndihlala eMonti, eMzansi Africa.Ndingumculi-mzobo-mzobo kwaye izinto ezithandwayo zibandakanya ukuhamba elunxwemeni kusihlwa, i-pin pin bowling kunye nokuhamba. Ngamanye amaxesha, ndiyonwaba ekwenzeni umculo nokudlala imidlalo yevidiyo. Ukususela kumncinci (njengokuba ndiyakhumbula) ndihlala ndicinga ngeempawu zamagunya kunye nexesha elidlulileyo ukubonisa inkqubo yehlabathi.Ukususela ekuqaleni / ukuza kum ngqalelo kwi-cryptocurrency – ndazi thanda kakhulu iimali ezidijithali kunye nemigangatho yazo yokunikezelwa kwemisebenzi.
Uqale nini ukungena kwiiMali eziDijithali, kwaye ungathi zawungenela ntoni?
Ndaqala ukuva nge-PIVX phakathi kwe-2017 kwaye ndazibandakanya kungekudala emva koko. Emva kokubandakanyeka nge-cryptocurrency ukususela ngo-2015 xa umhlobo endimisele ukuba yi-bitcoin, umhlobo ofanayo wandikhokelela ukuba ndifumene i-PIVX. Ngaphandle kwentshiseko ebenayo xa ethetha nge-PIVX, ndandinomdla wokuba yinxalenye ye-PIVX xa ndade ndijoyine i-slack kwaye ndidibana naloo ndawo yamkelekileyo, enomdla kunye nomgomo oqhutyelwa phambili. Ngokungafani nantoni na enye indawo endakhe ndadibana nayo kwi-intanethi- “ndathengiswa” ngokujoyina uluntu.Ngaphezulu, ngoko ke uluntu, ndandixabisa kwaye ndakholelwa ukuba yintoni enye imali eyimile – Ubumfihlo. I-PIVX iyimali eyimfihlo yam intando kwaye ubumfihlo bubunzima obunzima ndiyakholelwa ukuba yabekwa bucala yinkqubo ye-bureaucratic ngenzuzo yayo kunabantu.
Ngubani ophefumlelweyo xa kuziwa kwi-Cryptocurrency kunye ne-blockchain ubuchwepheshe?
Ukuphefumlelwa kwam ukukhalaza ngokungathandabuzekiyo nguJeffrey. Ilungu eliphambili lomphakathi we-PIVX kunye nomhlobo ongunaphakade kum. Sakhula kwindawo apho inkcubeko kukuphulaphula abo beza phambi kwakho (abantu abadala) ngaphandle kokubuza imibuzo. Mhlawumbi kungenasiphelo sokuthi umtshini we cryptocurrency kufuneka uthathe ixesha ukutshitshisa ngokufanelekileyo abantu bethu. Nangona kunjalo, akuzange kumise uJeffrey, ukususela ekuqaleni. Ndisoloko ndiba nobugcisa ngandlela-thile Ndiyakhumbula ngokucacileyo iJeffrey ehamba kunye nokwenza iifom yezilwanyana zokulungisa kuzo zonke iingxaki zabo. Kuya kuba ngamaxesha afana nale ndawo apho iJeffrey yayiza kuhlala iqhube incoko kwaye ungalokothi unganqikaze ukwenza ithuba lokukhupha ikusasa lemali: Bitcoin. Ininzi yexesha esasiya kubashiya abaxhasi, bengenanto kwaye bayakhohlwa ubunzulu beengxoxo esasiba nazo.Nangona kunjalo, kwiinyanga ezigqithisileyo (kunye neengxoxo eziqhelekileyo / eziqhelekileyo ze-bitcoin & cryptocurrency ezifikelela kubantu bethu) uJeffrey uye waba uhlobo oluthile lwe-crypto-udumo kwisixeko sethu. Sivame ukuma kwixesha lethu kwiintsuku zoluntu (ngokubanzi ivenkile yokutya) apho abaxhasi / abaqeqeshi besikolo bavame ukubuza: “I-Bitcoin ihamba njani Jeffrey?”
Kuye kube yinto ekhuthazayo ukubona umbono kaJeffrey, ukuzimisela, kunye nokuhambelana kwe-cryptocurrency. Ndiyabulela ngonaphakade ngenxa yokuzibuza kwakhe kunye nangenxa yoncedo lonke nokunika ubungqina bakhe kubantu bonke emhlabeni jikelele.
Ngaba ucinga ukuba i-blockchain inikezela iqonga lezemali eliphezulu ngaphezu kweenkqubo ze-fiat zanamhlanje?
Ngokuqinisekileyo. Ndicinga ukuba lo mbuzo uxhomekeke kwindlela owujonga ngayo. Kodwa ngokuqinisekileyo ndenza. Amathuba enkqubo ye-blockchain anikezela ngokucacileyo ngakumbi ngakumbi kuneendlela zangaphambili. Ubuchwephesha beBlockchain basasaza kwaye buya kuguqulwa ukuze bafikelele kwimisebenzi yabo engakholwanga kwiminyaka ezayo. Injongo ye-blockchain kunye nokunikezelwa kwemisebenzi yinkqubo yenzuzo yodwa yabantu (ngokubanzi) kwaye kungekhona nje amagunya ambalwa. I-PIVX ngumzekelo wale nkqubo kunye neenkqubo zabo zoLawulo loLuntu oluMiweyo.
Ukuba sinokwenza oku kude kuluntu kunye nenkqubo yehlabathi esekelwe kukuhaha. Kwiminyaka embalwa elandelayo kuphela kufuneka ibe yinto enomdla kunye nawo onke amathuba okukhutshwa kwezixhobo eziza kubonakala. Imali engenamaphepha, ulawulo oluqulunqwe ngumphakathi, ubuchwephesha be-Hi-tech (obungenasiphelo) zokudlulisela abantu abacingayo, isizwe esilungileyo ngokupheleleyo. Zange lakho ixesha elibetere lokuphila.
Uyenzela ntoni i-PIVX?
Ndaqala ukubeka uphawu lwam kwi-PIVX kwikota yesithathu ka-2017 xa ndiguqulela iwebhusayithi ye-pivx.org kwisiXhosa (ulwimi lwam ulwimi, ulwimi lwaseMzantsi Afrika olusemthethweni). Ukulandela le nguqulelo, ndisebenze kunye neqela lokuguqulela kunye noHanna (oh Captain!) Ukubonelela ngeenguqu ezininzi kwiinyanga ukususela (Suka kuHanna kunye nabo bonke abahumushi). Ndiye ndathatha inxaxheba ekwenzeni iividiyo ze-PIVX kunye neJeffrey noMaeboo, othe wabuya ukuza iqela esiyibiza ngokuba ngabameli baka-PIVX baseMzantsi Afrika. Umdla wam wokugqibela kunye noluntu sele lithatha ithuba lokuncedisa apho ndingakwazi khona kwisiteshi sokuxhasa.
Sixelele kancinci malunga nokuba ngummeli we-PIVX waseMzantsi Afrika.
Ewe, uJeffrey, mna noMaeboo sinooPiviya bokuqala kwiindawo zethu zokuhlala. Kungekudala emva kokukhuthaza rhoqo i-PIVX kwi-intanethi nakwiindawo zethu zendawo sakwazi ukusingatha i-PIVX ehlangene eKapa, apho sakwazi ukukhanga abantu abanomdla kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe. Esi sihlandlo esimnandi kwaye siqhamo kwaye kufuneka sihlelwe kwakhona kwakhona. Ndiyicinga eli gama: I-terminology ye-Pivx yaseMzantsi Afrika yavela ngokwemvelo kuba i-PIVX ibe ngandlela-thile ibe yindlela yokuphila kum kunye neqela lam.
Emva kokwenza iividiyo ze-PIVX ndenze ingoma malunga ne-cryptocurrency. Ndonwabile kakhulu ngamava kwaye ndiya kuba ne-Purple Tunes ezininzi eziza kuma-airwaves ngokukhawuleza ngokwaneleyo (ngoko gcina ulungelelanise).
Zeziphi izinto eziphezulu ezintathu othanda ukuba ungathenga usebenzisa i-Cryptocurrencies?
Ehlabathini lonke ndivele ndiyazi indawo apho umntu angathenga khona nantoni na kwaye aphile ekuthengeni kwe-cryptocurrency kuphela. Nangona kunjalo, ukuhlala eMzantsi Afrika ukukhungulwa kweempahla akukafuneka kwamkelwe ngokubanzi ngabahwebi. Ndinqwenela ukuba ndithengise ukutya, isithuthi kunye nezinye ipahla kunye nokuhlawula i-cryptocurrency yangaphakathi.
Ngaba ishishini elwamkelayo i-Bitcoin / i-PIVX okanye enye i-cryptos ithola abathengi abatsha / ingqalelo?
Ngokuqinisekileyo. Inyaniso yokuba i-Cryptocurrencies iyingcipheko-imele ibe yinto enomdla kumthengi ukuba kutheni imali ekhethekileyo yamkelwe njengendlela yokuhlawula eyongezelelweyo kwi-currency (fiat). Ukuba kukho nto ndiyakholelwa ukuba i-cryptocurrencies yamkelwe ngabahwebi njengendlela yokuhlawula yindlela efanelekileyo yokusasazeka kwe-cryptocurrency awareness. Umntu othenga ngobuqotho kwivenkile kodwa engayazi ukukhusela i-cryptocurrency kufuneka ahanjiswe kwi-cryptocurrency elula ngenxa yokunyaniseka kwakhe kwivenkile.